SMB Wi-Fi Vagadziri & Vatengesi - China SMB Wi-Fi Fekitori
DCN EAP380-E ndeye isina waya yekuwana poindi (AP) yakagadzirirwa musika weSMB. Inopa yakakwana sevhisi yekutsigira sevhisi uye inoratidzira kuvimbika kwakakwirira, chengetedzo yepamusoro, yakapusa network kuendesa, otomatiki AC kuwanikwa uye kugadzirisa, uye chaiyo nguva manejimendi uye kugadzirisa, iyo inosangana zviri nyore network kutumirwa zvinodiwa. Iyo AP inoenderana 802.11ac wave 2 zviyero kutevedzera uye inogona kupa yakakwira 1.167Gbps kubudikidza - 300Mbps mu2.4G ine 2 × 2, 867Mbps mu5G ine 2 × 2. Iyo ...
EAP280-E SMB Smart Indoor 802.11n Imwe Bhendi AP
EAP280-E ibhizimusi idzva risingadhuri Wi-Fi AP (Access Point) yakaunzwa neDCN. Iyi AP inotsigira 802.11n yakajairwa neMega Ethernet kumusoro kwekubatanidza. Iyo EAP280-E inoshanda mu2.4G bhendi uye iyo yepamusoro yekupfuura inogona kusvika ku300Mbps. EAP280-E inopa kuita kwakaringana kweredhiyo, nhare, chengetedzo uye traffic mainjiniya nezvimwe, zvinogona kushanda pamwe nemuviri kana gore AC (Access Controller) kupa bhizinesi, kambasi yeWi-Fi network yekuwana pamwe nedhijitari kirasi kamuri, yekutengesa Wi-Fi ...
EAP220 Smart 802.11ac Dual Band In-madziro Wireless AP
EAP220 inogona kuiswa mune yakajairwa x86 mapaneru, isina kuvakwazve kwemadziro kuchengetedza mutengo uye nguva, uye kuchengetedza iko kwekushongedza kwepakutanga. EAP220 inotsigira iyo 802.11AC standard2.4G uye 5G bhendi, uye inotsigira yepamusoro-soro inowanika isina bandwidth ye 733Mbps. EAP220 inopa 100M uplink Ethernet chiteshi, imwe yakadzika 100M Ethernet chiteshi uye imwe RJ11 chiteshi chefoni. Iyo uplink chiteshi inogona kutsigira 802.3af POE, saka EAP220 kwete chete inogona kupa yakakwira kuita WIFI kufukidza, asi zvakare inogona kupa ...
EAP180 Smart 802.11n Imwe Bhendi Mune-madziro Wireless AP
EAP180 inogona kuiswa mune yakajairwa x86 mapaneru, isina r kuvaka masvingo kuchengetedza nguva uye mutengo. EAP180 inotsigira iyo 802.11n standard uye ichishanda mu2.4G bhendi, inogona kupa 300M bandwidth. EAP180 inopa 1 * 100M uplink Ethernet port, imwechete pasi 100M Ethernet chiteshi uye imwe RJ11 chiteshi chefoni. Iine uplink chiteshi inotsigira 802.3af POE, EAP180 haingopi chete yakakwira kuita kweWiFi kufukidza, asi zvakare yakawedzera wired kubatana uye nhare yekubatanidza. Zvinokosha Zvimiro uye Zvakasarudzika Nyore t ...
EAC680 SMB Smart Wireless Kuwana Mutongi
DCN EAC680 inyanzvi yekuwana controller (AC) yakagadzirirwa SMB isina waya netiweki uye makuru mabhizinesi matavi. Inogona kusangana neDCN smart EAP nhepfenyuro isina waya yekuwana mapoinzi (APs) kuti igadzire yepakati inogadziriswa isina waya LAN (WLAN) mhinduro EAC680 inotsigira 24 * 10/100 / 1000MBase-T uye 4 * 10GbE SFP +) yeuplink, inogona kubata kusvika ku520 smart wireless APs. Iyo chishandiso inopa yakasimba WLAN yekuwana kudzora kuburikidza nesystem senge chaiyo chaiyo mushandisi kudzora uye manejimendi, yakazara RF manejimendi uye securi ...
EAC660 SMB Smart Wireless Kuwana Mutongi
Iyo EAC660 smart smart access controller (AC) yakagadzirwa neYunke China Information Technology Limited (inozodaidzwa kunzi DCN) yeSMB isina waya netiweki uye makuru mabhizinesi emabhizinesi. Inogona kusangana neDCN smart EAP nhepfenyuro isina waya yekuwana mapoinzi (APs) kuti igadzire yepakati inogadziriswa isina waya LAN (WLAN) mhinduro EAC660 inotsigira 4 * GbE Combo (SFP / RJ45), 12 * 1000M SFP chiteshi uye 4 * 10GbE SFP + zviteshi zveuplink. Inogona kubata inosvika makumi maviri neshanu smart wireless APs. Chigadzirwa chinopa WLAN yakasimba inogamuchira ...
EAP380-L ibhizimusi nyowani-inodhura Wi-Fi AP (Access Point) yakaunzwa neDCN. Iyi AP inotsigira ese ari maviri 802.11ac uye 802.11n yakaenzana neMega Ethernet yakakwira kumusoro yekubatanidza. Iyo yepamusoro sisitimu yakasanganiswa kubudikidza inogona kusvika 733Mbps. Iyo 2.4GHz radio inotsigira 802.11n standard ine inosvika kusvika 300Mbps kubudikidza; redhiyo ye5GHz inotsigira 802.11ac standard ine inosvika 433Mbps kubudikidza. EAP380-L inopa kuita kwakasiyana siyana kweredhiyo, nhare, chengetedzo uye mainjiniya emigwagwa nezvimwe, zvinogona ...